Lehilahy voaheloka 5 taona an-tranomaizina noho ny fanaparitahana COVID tany Vietnam
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Vietnam » Lehilahy voaheloka 5 taona an-tranomaizina noho ny fanaparitahana COVID tany Vietnam
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Crime • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany • Vaovao Mafana Vietnam
Lehilahy Vietnamianina 28 taona no nigadra 5 taona noho ny fitetezany sy fanaparitahana ilay viriosy COVID-19.
Ny fanitsakitsahana ny fameperana COVID-19 dia mitarika sazy an-tranomaizina lava.
Lehilahy Vietnamianina iray izay nahavoa olona 8 tamin'ny COVID-19 no niditra am-ponja.
Androany dia maherin'ny 13,000 ny maty ary tranga 520,000 COVID-19 any Vietnam.
Le Van Tri, 28 taona dia voaheloka ho “nanaparitaka areti-mifindra mampidi-doza” ary voaheloka dimy taona an-tranomaizina noho ny fanitsakitsahana fameperana mafy ny quarantine coronavirus ary nanaparitaka ny aretina tamin'olon-kafa.
Fanamelohana sy fanamelohana haingana no nitranga nandritra ny fitsarana iray andro tao amin'ny tribonaly People of the southern Vietnamese of Ca Mau.
"Niverina nankany Ca Mau avy any amin'ny tanànan'i Ho Chi Minh… i Tri ary nandika ny lalàna momba ny quarantine 21 andro," hoy ny filazan'ny fitsarana.
"Tri dia nahitana olona valo, ny iray maty noho ny virus taorian'ny iray volana fitsaboana", hoy ihany izy.
Olona roa hafa no voaheloka higadra 18 volana sy roa volana any Vietnam noho ny fiampangana azy ihany.
i Vietnam dia iray amin'ny tantaran'ny fahombiazan'ny coronavirus manerantany noho ny fitsapana faobe kendrena, ny fanarahan-dia amin'ny fifandraisana mahery vaika, ny famerana ny sisintany ary ny quarantine henjana. Saingy ny vondron'aretina vaovao nanomboka ny faran'ny volana aprily dia nandoto izany firaketana izany.
Ca Mau, faritany atsimo atsimo ao Vietnam, dia nitatitra tranga 191 fotsiny ary maty roa taorian'ny nanombohan'ny valan'aretina, ambany kokoa noho ny tranga 260,000 ary 10,685 XNUMX no maty tao amin'ny foiben-toeran'ny coronavirus, tanànan'i Ho Chi Minh.
Natosiky ny variana Delta tena azo nafindra, nanomboka ny 27 aprily ny onja fahefatra Vietnam tamin'izany fotoana izany, 35 monja ny olona maty noho ny COVID-19, raha teo ambanin'ny 4,000 kosa ny totalin'ny aretina. Androany, maherin'ny 13,000 ny maty, raha 520,000 ny isan'ireo tranga tranga.
Sahabo ho 80 isanjaton'ny maty sy antsasaky ny aretina no niseho tao amin'ny tanàna lehibe indrindra ao amin'ny firenena Ho Chi Minh City.
Fonenan'ny olona sivy tapitrisa, ny tanànan'i Ho Chi Minh dia niharan'ny fanidiana tanteraka hatramin'ny 23 aogositra, ka noraran'ny mponina tsy hiala ny tranony na hiantsena sakafo aza.
Noho ny fameperana napetraka haharitra hatramin'ny 15 septambra, ny praiminisitra vaovao voafidy Pham Minh Chinh dia nandidy ny hanaovana fitsapana faobe ho an'ireo mponina ao an-tanàna ary nametraka miaramila hampihatra ny fijanonana amin'ny baiko an-trano sy hanampy amin'ny fanomezana sakafo.